Goobaha Codbixinta Doorashada J. Congo Oo Furmay Iyo Mucaaradka Oo Qaadacay -... - Wararka Maanta
Home/Warka Caalamka/Goobaha codbixinta doorashada J. Congo oo furmay iyo mucaaradka oo qaadacay -…
Goobaha codbixinta doorashada J. Congo oo furmay iyo mucaaradka oo qaadacay -…
Goobaha codbixinta doorashooyinka madaxtinimo ayaa ka furmay doorashada jamhuuriyada Congo, taas oo ay qaadaceen xisbiga mucaaradka ugu weyn isla markaana ay weerareen dadka dhaliishan oo u janjeera dhanka hogaamiyaha Denis Sassou Nguesso.
Xarumaha codbixinta ayaa la furay 7-dii subaxnimo ee Dalkaas (06:00 GMT) waxayna xirmi doonaan 5-ta galabnimo (16:00 GMT).
In ka badan 2.5 milyan oo cod bixiyayaal ah ayaa isdiiwaan galiyay si ay uga qeyb qaataan doorashada, taas oo Nguesso oo 77 jir ah si weyn loo filayo in uu ka guuleysto, isaga oo la tartamaya ilaa lix musharax.
Liiska tartamayaasha waxaa hogaaminaya dhaqaaleyahan iyo musharaxa labaad ee u tartamaya jagada madaxweynenimada Guy-Brice Parfait Kolelas, oo sabtidii la dhigay isbitaal.
Ololeeyaha Kolelas ma uusan sheegin nooca xanuun ee ku dhacay 60 jirkaan, laakiin xubin ka mid ah qoyska ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AP in laga helay coronavirus.
Nguesso, oo hore u ahaan jiray sargaal ka mid ahaa ciidamadii cirka ee congo, ayaa xukunka soo qabtay 1979-kii, wuxuuna xafiiska haya 36-sano, isaga oo markale u hanqal taagaya in uu kurisga ku guuleysto. tani waxaa ay ka dhigeysaa in uu kamid noqdo hogaamiyaasha ugu waqtiga dheer aduunka.
Wuxuu rajeynayaa guul wareega koowaad ah si loo xaqiijiyo markii afaraad inuu maamulo dalka bartamaha Afrika ee saliida laga soo saaro oo ay ku nool yihiin shan milyan oo qof.
Kaniisada Katooliga ee dalkaasi ayaa sidoo kale su’aalo ka keentay cadaalada codbixinta, ka dib markii dowlada ay diiday codsigeedii ahaa in la geeyo in ka badan 1,000 kormeerayaal doorashada ah..
Natiijooyinka doorashada waxaa la filayaa in lagu sii daayo shan maalmood gudahood ah.
codbixinta Congo Doorashada furmay Goobaha iyo Mucaaradka qaadacay
Maurizio Sarri oo Kusoo laabanaya Shaqada Tababarnimo waxana Lala...
Kooxo hubeysan oo dil qorsheysan ka fuliyey magaalada Muqdisho